दुध चिया –४
चिया पसलमा उसलाई भेटेदेखि धर्मशास्त्रका किताब पढेर ज्ञानी बन्ने मेरो सपना फिक्का भएको थियो। हुँदाहुँदा पछि त ऊ स्वंय धर्मशास्त्रजस्ती बनी। यस्तो लाग्थ्यो– मेरो ब्रह्माण्ड उसैलाई केन्द्रबिन्दु मानेर फनफनी घुमिरहेछ। गोंगबु चोकदेखि भित्रैभित्रै म कहिल्यै नगएको ठाउँमा उसले स्कुटी लगी। एउटा नयाँ घरको आँगनमा रोकेर स्टयान्ड लगाई। ‘ऊ हाम्रो नेपालगञ्जको अफिसको स्टाफ, काम परेर आको थियो’, आफ्ना आमाबुवासँग मेरो झुठो परिचय गराई, ‘एक रात किन होटलमा बस्नु? हाम्रै घर खाली छ भनेर लिएर आको।’
खाना खाने बेलामा उसका बुवाले सोधे– के थरी पर्नुभो तपाईँ?‘सापकोटा।’‘बिहेबारी भइसक्यो?’मैले नाइँको संकेतमा टाउको हल्लाएँ। ‘अब हुन्छ,’ उसले बीचमा प्वाक्क बोली। मैले खान लागेको गास रोकेर पुलुक्क हेरें। उसले बाँया आँखा झिम्काई।
‘अनि त्यो घिमिरेकी छोरी, जसका दाजुभाइ नभएकाले तिमीहरुसँगै अदुवा र घ्युको भारी बोकेर हाट जान्थी। उसको ठूलो भारी देखेर तिमी सोच्थ्यौं, अलिकति सामान बरु मै बोकिदिन्छु, ऊ कता छ अचेल?’ मैले फेरि पनि उत्तर दिइनँ।
त्यसको केहीदिनपछि एक साँझ स्कुलबाट फर्केर बुवाले भने– केटा, भोलि तँ र म हाट जाने। किताबसिताब हालेर झोला तयार पारेस्।भदौ महिना त कहिल्यै हाट जानुपर्दैनथ्यो। हाट जाँदा अदुवा र घ्यु बोक्नु पर्थ्यो। किताब लिएर हाट जानुपर्ने बुवाको कुरा मैले बुझिनँ। सोध्ने आँट पनि भएन। अरुका लागि बुवा स्कुलमा मात्र हेडसर थिए मेरा लागि त घरमा पनि।
‘अँ साँच्ची ती मालचरी अचेल पनि उड्छन् होला है,’ उसले मेरो स्मृतिको रिल रोकी। ‘थाहा छैन’ मैले सुस्तरी भनें।
भाइ मालचरी आउने बेला कुरेर बस्थ्यो।दशैंका बेला मालचरी माथि माथि आकाशमा लहर बनाएर उधोतिर जान्थे। गर्मी भएपछि त्यसरी नै उभोतिर फर्कन्थे। फुच्चे हुँदा मलाई मालचरी बनेर आकाशमा उड्न खुब रहर लाग्थ्यो। तर जब लहरबाट एकदुई वटा मालचरी छुटेर पछिपछि उडेको देख्थें, सोच्थें– ती छुट्ने मालचरी पनि मजस्तै साना होलान्। ठूला मालचरी फर्केर छुटेकालाई पनि लहरमा मिसाए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्थें। तर अघि गइसकेका मालचरी फर्किन्थेनन्। म आफैंसँग मुर्मुरिन्थें– कस्ता मालचरी रैछन्, साना छोराछोरीलाई एक्लै छोडेर जाने?
‘हेर, छोरो मान्छे भएर नि रोको’उसले बिस्तारै हत्केलाले मेरा आँशु पुछिदिई। अनि मेरो छातीमा सुस्तरी आफ्नो टाउको राखेर पल्टिई।***‘तिमीलाई राम्ररी मोटरसाइकल चलाउन आउँदो रैनछ, खै लेऊ म चलाउँछु’, नारायणघाटको पुल कटेसी उसले भनी। ‘थानकोटको ओह्रालोमा मैले ल्याएँ, मुग्लिन तलको धुलोमा मैले कुदाएँ। अब सम्म हाइवे आएसी चलाउन आउँदैन रे’ मोटरसाइकलमा ब्रेक लगाएर उसलाई आँखा तरें।
मेरो गाउँसम्म मोटरसाइकलमा जाने योजना उसकै थियो। एकदिन कोठामा आएर आमालाई साँची राखेर उसले मलाई गाउँ जाने कुरा सुनाई। आमाले पनि केही सोच्दी नसोची हुन्छ भनिदिइन्। ऊ कसरी आमाकी त्यति प्यारी बनी? मलाई अचम्म लाग्यो। ‘त्यति टाढा सकिन्नँ मोटरसाइकलमा जान’, मैले नाइँ भनें।
उसले एक्सिलेटर फेरि बेस्सरी बटारी।***अर्कोदिन ४ बजेतिर हामी गाउँ पुग्यौं। पश्चिमतिरको डाँडोमा डुब्न लागेको सूर्यले आधा गाउँ छाँया थियो आधा घाम। केही वर्षपहिले म यतिबेलै घर फर्कन्थें स्कुलबाट। खरले छाएको घरको छानोमाथि निस्केको धुँवा देखेपछि आमाले के खाजा पकाएकी होलिन् अनुमान लगाउँथें। राति पढ्न टुकी बाल्ने बत्ति बनाउँथे।
उताबाट के भने मैले सुनिनँ।‘अस्ति नै मसँग आको थियो नि, शिरिषकुमार सापकोटा। हो, ऊ नै हो तपाईँको ज्वाइँ। देख्नुभो तपाईँकी छोरी कति स्मार्ट छ, ख्यालख्यालमै ज्वाइँ पनि खोजी सकी।’
उसको अन्तिम वाक्य मेरो कानमा होइन मुटुमा ठोक्कियो। यताउता हेरें। चर्न गएका गाईबाख्रा घर फर्किँदै थिए। तल खेतमा एक हुल केटाकेटी चुंगी खेलिरहेका थिए। कर्णालीको झोलुंगे पुल तरेर कोही गाउँतिर आउँदै थियो। माथि डाँडामा अलिकति पहेँलो घाम बाँकी थियो। डाँडाभन्दा माथिको आकाशमा एक लहर मालचरी उभोतिर उडिरहेका थिए...(समाप्त)
यी पनि पढ्नुस् दुध चिया
शनिबार, फाल्गुण २१, २०७३ १०:५१:१५